ပင္မစာမ်က္ႏွာ - Odyssey Travels & Tours - Travel to Myanmar
Xperience Myanmar With Us
Perfecting One-on-One Planning for YOUR Trip ofaLifetime
Odyssey Travels & Tours မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
We areadestination management business based in Yangon, with branch offices operating in Mandalay & Pindaya.Customer satisfaction is our greatest ambition and we strive to present quality vacation packages that make travellingahassle-free and enjoyable experience. Whether you’re travelling for business or leisure, as part ofatour group or travelling solo, we can cater to your specific needs to ensure you have the.. ဆက်ဖတ်ရန်
ဒူဘိုင်း – အဘူဒါဘီ
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ Emirate လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်အမှတ် EK-389 ဖြင့် နံနက် 2:10 တွင်စတင်ထွက်ခွာလာရာ ဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ဒေသစံတော်ချိန် 5:55AM တွင်ရောက်ရှိပါမည်။ ဒေသခံဧည့်လမ်းညွှန်မှနွေးထွေးပျူငှာစွာ လာရောက်ကြိုဆိုပြီးနောက် နံနက်စာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။ ပထမဦးစွာ ဒူဘိုင်းမြို့၏သမိုင်းကြောင်းနှင့် မြို့သူမြို့သားတို့၏ ရှေးယခင်နေထိုင်မှုပုံစံများ ထင်ဟပ်ပြသထားသော Dubai Museum သို့ သွားရောက်လေ့လာကြပါမည်။
ဆိုးလ် – ကိုရီးယား
Duration: ၅ ညအိပ် ၊ ၆ ရက်
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ကိုရီးယား အင်ချွန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိသည်နှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ နွေးထွေး ပျူငှာစွာ လာရောက်ကြိုဆိုပါမည်။ ပထမဦးစွာ ရ မိုင်ရှည်လျားသော် Cheonggyecheon ချောင်းသို့သွားရောက်၍ အလှဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူး ကြပါမည်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ဘုရင်များအဆက်ဆက်နန်းတက်ခဲ့သော Gwanghwamun နန်းတော်သို့ သွားရောက်လေ့လာ ကြပါမည်။ ထိုမှတဆင့် ကိုရီးယား၏အကြီးဆုံးစျေးဖြစ်၍ ၂၄ နာရီဖွင့်သော Dongdaemun စျေးသို့သွားရောက်ပါမည်။ ထို့နောက် Gwangwon နယ်၏ မြို ့ဖြစ်သော Chuncheon မြို့သို့ သွားရောက်ကြပါမည်။
စင်္ကာပူ ခရီးစဉ် ( ၃ )
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ Singapore နိုင်ငံ ချန်ဂီလေဆိပ်သို ့ဆိုက်ရောက်သည်နှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက် ခရီးဦး ကြိုဆိုပါမည်။ ထို့နောက် တွင် နာမည်ကြီးနေရာများဖြစ်တဲ့ Merlion Park ၊ Suntec City ၊ Esplanade နှင့် Peninsula Plaza (Little Myanmar) စသည့်နေရာ များ သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ ညစာကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် တည်းခိုမည့်ဟိုတယ် သို့ ပို့ဆောင်ပေး ပါမည်။
Hanoi – Halong Overnight on Cruise
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ စတင်ထွက်ခွာလာရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Noi Bai အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိသည်နှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ နွေးထွေးပျူငှာစွာ လာရောက်ကြိုဆိုပါမည်။ညစာတည်ခင်းဧည့်ခံပြီးနောက် ဟိုတယ်တွင် Check – in ပြုလုပ်ပြီးနောက် အေးချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Customer satisfaction is our greatest ambition and we strive to present quality vacation packages that make travellingahassle-free and enjoyable experience. Whether you’re travelling for business or leisure, as part ofatour group or travelling solo, we can cater to your specific needs to ensure you have the..Continute
နွေးထွေးခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ခရီးသွားအားလုံးအတွက် Odyssey ❤️
Posted by Odyssey on Friday, May 4, 2018